रेनु विरुद्ध साइवर अपराधको सूचिमा को को परे ? पूरा हेर्नुहोस
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालको चरित्र हं*त्या गर्ने नियतले सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोष्ट हुन थालेपछि त्यस विं*रुद प्रहरी सक्रियताको माग उठेको छ । शनिबारका दिन ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा आक्रमण भएपछि ज्ञानेन्द्र शाही समर्थकहरुले रेनु दाहालको चरित्र हं*त्या गर्न खोजेका हुन । शाही समर्थकहरुले रेणु दाहालमाथि अश्लिल गाली गलौज गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा अपाच्य तस्वीर र अन्य सामग्री पोष्ट गरेका छन ।
जननिर्वाचित मेयर विरुद्ध गरिएको यस्ता हर्कत विरुद्ध नेपाल प्रहरीले सक्रियता देखाउन नसकेको भन्दै प्रहरीको समेत आलोचना गरिएको छ । रेणु भने कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा देशबाहिर रहेको बेला शाहीको कार्यक्रम बिथोलिएको थियो । शाही समर्थकहरुले उक्त घटनामा रेणु दाहालको हात रहेको भन्दै उनको आलोचना गरेका हुन ।
रेणु दाहालसँगै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत जोडेर आलोचना गरिएको देखिन्छ । रेणु दाहाल देशबाहिर रहेको बेला समेत उनलाई अनावश्यक रुपमा घटनासँग मुछेर प्रचारबाजी हुन । थालेपछि समर्थकहरु आक्रोशमा आएको देखिन्छ । तर रेणु दाहाल समर्थक तथा नेकपाका नेता एवं कार्यकर्ताले शाही समर्थकहरुले सामाजिक अराजकता, अश्लिलता र व्यक्तिको चरित्र हं*त्या गर्ने काम गरेको भन्दै सबै अराजक तत्वहरुमाथि कडा कारर्वाही गर्न माग गरेका छन ।
नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री प्रकाशन या प्रसारण गर्ने कार्यलाई अपराध मानेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत भइरहेका यस्ता अपराधमा प्रहरीले भने अहिलेसम्म कुनै कारर्वाही अघि बढाएको छैन । सामान्यतः जाहेरी दिएपछि मात्रै का’र्वाही अघि बढाउने परिपाटी रहेको नेपाल प्रहरीको भूमिका साइबर अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा गरिएको देखिन्छ ।
रेनु दाहाल विरुद्ध साइवर अपराध गर्नेहरुमा सुरेश सुवेदी दीपक, भक्तबहादुर थापा, दीपक बुढा, रोहित कुमार खड्का, आकाश रिजाल लगायत छन्। उनीहरुको फेसबुक आइडी फेक हुन् वा होइनन् ? भन्ने कुराको खोजी भइरहेको छ । यसका साथै उनीहरुलाई उकास्ने गिरोहको पनि खोजी भइरहेको छ ।